Madaxweynaha oo casho sharaf u sameeyay xubnaha Akademiyad Goboleedka Afka Soomaaliga – Radio Muqdisho
25 Febraayo 2015, Muqdisho: Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xaley xarunta madaxtooyada casho sharaf ugu sameeyay xubnaha Akademiyad Goboleedka Cusub ee Afka Soomaaliga oo dhowaaan xarunteeda la dhagax dhigey magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha ayaa ku ammaaney aqoonyahannada xubnaha ka ah Akademiyad Goboleedka Afka Soomaaliga ee ka kala socdey Soomaaliya, Djibouti, Ethiopia iyo Kenya, sida ay ugu heelan yihiin inay sare u qaadaan dhaqanka iyo Afka Soomaaliga, isagoo xusey in shaqada haatan la qabtaa iyo horumarka laga sameeyo intaba ay waxtar weyn u yeelan doonaan jiilka soo socda.
“Afka Soomaaliga waa in horumarkiisa la gaarsiiyaa heer lagu adeegsan karo tiknoloojiyadda, sayniska, iyo culuunta kala duwan. Waxaa laga yaabaa in dadka qaar ay yiraahdaan Afka Soomaaliga kuma habboona in culuunta qaar lagu dhigo. Taasi sax ma ahan waayo afafka aanu u naqaano inay hormareen, waxaa ka shaqeeyay oo heerkaasi gaarsiiyey dadkii lahaa, anagan haddan si hufan ugu kacno afkeena iyo dhaqankeenna waxaan dhaxal wanaagsan uga tegeynaa jiilka soo socda. Soomaaliya iyo Djibouti si buuxda ayay gacan uga geysanayaan maalgelinta dhismaha xaruntan, cusuba, sidoo kale waxaan doonaynaa in degaannada Soomaalida ee Ethiopia iyo Kenya ay iyaguna talaabo taa la mid ah qaadaan, si xubin kasta uu u dareemo lahaanshaha akademiyaddan cusub”.
Madaxweynaya ayaa sidoo kale ka hadley doorka bulshada qurbajoogta Soomaalida ay ka qaadan karaan dib u dhiska iyo xasilinta dalka, isagoo sheegay in la joogo waqtigii ay soo laabana lahaayeen si ay dalkooda wax ugu qabtaan.
‘’Dalka horumar ayuu sameynayaa, wax bandanna waa dhimman yihiin. Dadka weli dibedda inaga jooga waxaan ku dhiirigelinaya inaysan sugin in dalkan uu iskii iska hagaago oo ay yimaadaan, kaalintoodana ka cayaaraan sidii waddanka loo xasilin lahaa, loona horumarin lahaa. Wax badan ayay qurbajogta qabteen oo dalka dan u ah, hase yeeshee dadaalkaasi in la kordhiyo waa lagama maarmaan,’’ ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale ka hadley kheyraadka kala duwan ee Ilaahay ku maneystey Soomaaliya, isagoo tusaale u soo qaatey shidaalka oo uu sheegay in mustaqbalka dhow ay shacabka Soomaaliyeed ka faa’ideysan doonaan.
‘’Kheyraadka waxaa leh muwaadiniinta Soomaaliyeed oo dhan. Shidaalka Muqdisho laga soo saaro waxaa wax ku leh Soomaalida ku dhaqan gobollada kala duwan ee dalka. Si la mid ah kheyraadka meelaha kale ee dalka ku jira, iyana Soomaali oo dhan ayuu ka dhexeeya. ’’
Waxaa uu sheegay in weli aaney jirin sharciyo rasmi ah oo lagu maamulayo qodista iyo wax soo saarka shidaalka, balse la sameyn doono sharciyo ku meel gaar ah inta laga helayo sharciyo dhameystiran.
Munaasabbadan waxaa isna ka hadley Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashiid Sharma’arke. Waxaa iyana halkaasi hadalo ka jeediyay qaar ka mid ah aqoonyahannada Akademiyad Goboleedka Afka Soomaaliga oo madaxweynaha ku ammaaney doorka hoggaamineed ee u ka qaadanayo horumarinta dhaqanka iyo Afka Soomaaliga.
Shirkii Af Soomaaliga ee Muqdisho ka socday oo Maanta la soo xiray
Isbitaalka Weyn ee Koofurta Galkacyo oo maalintii Sadaxaad ay ka socdaan howlo indha fiiqis lacag la'aan ah "Sawirro"